PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-10-28 - Umlingisi wakhala ezisola ngomshado
Umlingisi wakhala ezisola ngomshado
INKAKHA yomlingisi waseMelika uWill Smith (50) iveze ukuthi yazithola isikhihla isililo ngemuva kokuthola ukuthi yenze iphutha ngokushada nomlingisi uSheree Zampino. Lokhu ukuveze ngesikhathi exoxa kwiRed Table Talk ngoMsombuluko.
Wayeshade nalo mlingisi ngo-1992 bagcina sebenendodana uTrey Smith oseneminyaka engu25 manje. Uthe wayazi ukuthi umuntu okwakumele amshade uJada Pinkett Smith ongunkosikazi wakhe manje ngoba kwakukuningi ayebona behambisna ngakho naye. Uthe naye akazi kwenzekani kodwa wazithola eseshade noSheree.
“Umqondo wangibuyela kahle ngesikhathi sizikhiphile noSheree siseThe Palm, eNew York City, ukuthi ngenze iphutha ngokumshada. Ngazithola sengihleli phansi endlini yangasese ngikhala into enganqamuki ngiphinde ngizithole sengihleka khona lapho,” kusho uWill.
Uthe ukuya kwakhe endlini yangasese eshiya uSheree ehleli ngesikhathi bezikhiphile kungenxa yemicabango ayenayo yokuthi wenze iphutha ngokushada yena.
Uthe nomcabango wokuthi umuntu obekumele amthathe uJada wawulokhu umfikela kodwa engekho ezinhlelweni zokudivosa noSheree njengoba babesanda kushada.
Uthe umuzwa wokuba noJada waqina kakhulu ngesikhathi behleli naye eThe Baked Potato, eLos Angeles, bexoxa kanti naye uJada wayezizwa kanjalo ngoWill.
Kule ngxoxo uJada uveze ukuthi noma kwakunjalo kodwa babengajoli noWill ngaleso sikhathi.
Ngenxa yalesi simo umshado kaWill noSheree wagcina uphele ngo-1995 njengoba uSheree wafaka amaphepha edivosi enkantolo ngeValentines .